सांसदको प्रश्नको सामना नगरी हिँडे स्वास्थ्यमन्त्री, मन्त्रालयको काममा छैन दिलचस्वी – Health Post Nepal
सांसदको प्रश्नको सामना नगरी हिँडे स्वास्थ्यमन्त्री, मन्त्रालयको काममा छैन दिलचस्वी
२०७५ असोज १५ गते १७:००
संसदीय समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रम र गतिविधिमाथि छलफल हुँदै छ । मन्त्रालयका नीति, योजना महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुतीकरण गर्दै छन् । सांसदहरू एकचित्त भएर उनको प्रस्तुति सुन्दै छन् । तोकिएको समयभन्दा झन्डै आधा घण्टा ढिलो गरी बैठककक्षमा छिरे स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव ।
समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीको बाँयातर्फको कुर्सीमा बसेको केहीबेरमै मन्त्री यादव उठे र सभापतिसँग कानेखुसी गरे । सभापति घर्तीले डा. देवकोटालाई बीचैमा रोकिन् र सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराइन्, ‘मन्त्रीज्यू जानुपर्ने छ रे, उहाँलाई समितिमा स्वागत गरौँ र बिदाइ पनि गरिहालौँ ।’
उहाँमा मन्त्रालयबारे जानकारी पनि छैन, के भइरहेको छ भन्ने थाहा पनि छैन, त्यसो भएपछि संसद् छल्नुको विकल्प थिएन,’ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने ।
‘मन्त्रालय र मन्त्रीको भिजन सुन्न बैठक बोलाइएकोमा मन्त्री नै उठेपछि के बैठक बस्नु ?’ समितिका सदस्यहरू एकआपसमा भन्न थाले । मन्त्री निस्किएपछि सभापति घर्तीले न बैठक रोकिन्, न मन्त्रीलाई बस्नुपर्छ भन्न सकिन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका गतिविधिमा खासै चासो छैन । विदेश जानेबाहेक स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा सार्वजनिक समारोह वा कार्यक्रममा समेत स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा उनले भाग लिने नगरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यादवले सुरुमै मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूसँग समितिको छलफलमै नजाने बताएका थिए । तर, उनीहरूले मन्त्री नआएको भनेर आलोचना हुने बताउँदै हाजिर गरेर फर्किने जुक्ति दिएका थिए । ‘उहाँमा मन्त्रालयबारे जानकारी पनि छैन, के भइरहेको छ भन्ने थाहा पनि छैन, त्यसो भएपछि संसद् छल्नुको विकल्प थिएन,’ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने । सांसदहरूले मन्त्रालयका अधिकारी र सचिव डा. पुष्पा चौधरीको भनाइपछि थुप्रै जिज्ञासा राखे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको गुनासो गरेका थिए ।
मन्त्रालयको काममा छैन दिलचस्वी
यादवको पार्टी संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने समयमा समेत उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय नचाहेको चर्चा चलेको थियो । यादवले सुरुदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालय चाहे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र प्रदीप ज्ञवालीबाट खोस्न नचाहेको जानकारहरू बताउँछन् । चाहेको मन्त्रालय नपाए पनि सरकारमा सहभागी भएका यादवले निस्क्रियताबाटै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । पछिल्लो समय राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा डा. सुरेन्द्र आएपछि झन् यादवले सबैजसो जिम्मेवारी उनैलाई सुम्पिएका छन् । ‘कुनै पनि ब्रिफिङ, निर्णय वा भेटघाटमा बस्नै रुचाउनुहुन्न,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । मन्त्रालयको काममा ‘इन्टरटेन’ नगरेका यादब अहिलेसम्म अनियमितता, खरिद, नियुक्ती र सरुवा बढुवामा हुने चलखेलमा विवादमा पनि खासै तानिएका छैनन् ।